Chaza umphumela we-sputtering target detitanium agent
Izinto ezihlosiwe zinezinhlobonhlobo zezicelo kanye nesikhala esikhulu sokuthuthukiswa kwemakethe. Ukusebenza kahle okuphezulu, isisombululo se-decoating esilungele imvelo futhi esingenabuthi esikhiqizwe yinhlanganisela ye-ejenti ye-detitanium kanye nezimpawu zokumbozwa kwe-PVD.
Due to its non-toxic and environmentally friendly characteristics, i-ejenti ye-detitanium ayisoze yalimaza upende ovikelayo okhethiwe kanye ne-substrate, bese ususa ngokushesha i-IP enamathela, onomphumela omuhle wokwehlukanisa umbala..Kubhekiswe ikakhulu embonini ye-ion yokuhlobisa nge-Ti, Kholwa, I-TiCN, I-Ti + SS, Wena + Kr, Zr, ZrCN, I-TiALN, ZRALN, imikhiqizo emisha ene-plasma coating de-filming.
In terms of electro-color separation in the ion decorative plating room, ikhombise ukusebenza okuvelele ngokwengeziwe.Ngoba izindlela zendabuko zokususa amafilimu zisebenzisa ama-acid aqinile nama-alkalis, zizodala umonakalo omkhulu kupende wokuvikela okhethisayo, futhi kulula ukukhiqiza isimo sokugcotshwa kukapende wokuvikela namazinyo enja, okuzodala ukukhubazeka okuningi ngemuva kokuhlukaniswa kombala..Ifanele zonke izendlalelo ezingezansi nezinsimbi zensimbi, ithusi, ingxubevange, PNP, I-PCP, i-nickel, njll. Izinto ezihlosiwe ezinamandla zingakwazi ukususa ifilimu masinyane cishe 1-2 imizuzu, futhi ayinabuthi, engenaphunga, engenambala futhi esobala, futhi akulimazi ungqimba olungaphansi. Izici, ikakhulukazi ngemuva kokumbozwa kwe-IP ku-PNP, I-PCP, nezinsimbi ezingaphansi komhlaba zithathe umhlalaphansi, ingahlanzwa ngqo esithandweni somlilo, bese kufakwa i-IP coating, futhi inhlanganisela yinhle, asikho isidingo sokufaka kabusha i-electrochemical isendlalelo esingezansi.
Okwedlule: I-tungsten yasekhaya
Olandelayo: Izinto zokugcoba ezisezingeni eliphakeme (4N